Manohy Misambotra Ireo Mpanao Politika Kiorda i Tiorka, Ary Mametra Ny Fampiasana Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2016 8:20 GMT
Selahattin Dermitas naseho tamin'ny afisy nandritra ny fivoriam-bahoaka mpanohana ny HDP tao Alemaina. Creative commons.
Mitohy miseho amin'ny lohateny iraisam-pirenena ao anatin'ny volana faha-efatra ny famoretana taorian'ny fanonganam-panjakana ao Torkia, amin'izao volana Novambra izao, misy ny fanafihana an'ireo fampahalalam-baovao tsy miankina sy fisamborana mpanao politika marobe ao amin'ny mpanohitra mpanohana ny Kiorda Antokom-bahoaka Demokratika (HDP), anisan'izany i Selahattin Demirtaş sy Figen Yuksekdag, mpiara-mpitarika ny antoko .
Sambany tafiditra tao amin'ny parlemanta tamin'ny taona lasa ny antoko, izay miaro ny zon'ny vehivavy sy ny LGBTQ + miaraka amin'ireo vondrona vitsy an'isa, anisan'izany ny Kiorda. 59 no fitambaran'ireo parlemantera HDP.
Tamin'ny 4 Novambra, voasambotra niaraka tamin'ireo parlemantera HDP valo hafa i Demirtaş sy Yuksekdag izay tafiditra amin'ny fanadihadiana iadiana amin'ny fampihorohoroana. Nilaza ny tatitra tany am-boalohany fa nisy ny didy fampisamborana navoaka ho an'ireo solombavambahoaka HDP rehetra miisa 59, na dia voaporofo fa diso aza izany. Mitotaly 14 ny didy fisamborana navoaka.
Safidim-bahoaka 5.148.085 no eo ambanin'ny didy fampisamborana androany alina
Nosamborina noho ny fandavàna hamaly ny fanontanian'ny mpampanoa lalàna tamin'ny fanadihadiana miady amin'ny fampihorohoroana manohitra ny Antokon'ny Mpiasa Kurdistan (PKK) ireo mpikambana HDP ireo.
Voampanga ho manohana ary koa miasa toy ny mpisolo-tena ara-politikan'ny PKK ireo mpikambana ao amin'ny antoko, nanomboka nankahala indray an'ny PKK ny governemantan'ny Antokon'ny Rariny sy ny Fampandrosoana (AKP) any Ankara taorian'ny daroka baomba tao amin'ny tanàna faritra atsinanan'i Suruc.
Voatazona ao anatin'ny fanadihadiana miady amin'ny fampihorohoroana ihany koa ireo ben'ny tanàna HDP ao Diyarbakir, tanàna lehibe maro an'isa Kiorda ao atsimo-atsinanan'ny firenena tamin'ny 25 Oktobra.
Nahatonga ireo olom-pirenena maro tsy nizaka ny zony ny fepetra. Indrindra fa voasambotra ireo depiote telo ao amin'ny distrikan'i Hakkari ao Diyarbakir, izay nifidy 83,7% ho an'ny HDP.
Tamin'ny 6 Novambra, niampanga ny HDP ho manao famotsiam-bola ny Praiminisitra Binali Yıldırım:
Nafindran'izy ireo tany amin'ny mpampihorohoro ny vola nalefanay ho an'ny kaominina. Na iza na iza manimba ity firenena ity, dia hizaka izany, tsy misy fomba hafa. Tsy ireo midaroka baomba sy mandoro ihany, fa ireo izay manohana ny fampihorohoroana koa.
Solombavambahoaka AKP Istanbul, Burhan Kuzu nisioka hoe:
Tsy hoe tsy tonga ao an-tsaina izany; satria tsy nahazo fanohanana ara-politika avy amin'ny vahoaka intsony, mitady lalan-kivoahana, mety hampidirina am-ponja ny HDP?
Raha manana fanohanana matanjaka eo amin'ireo Tiorka ankavia eo amin'ny tontolo ara-politika ny HDP, toa lasa te-hiombo-kevitra amin'ny fomba fijerin'ny fanjakana ny hafa fa manohana ny fampihorohoroana ny HDP.
AKP – FETO [Fikambanana Mpampihorohoro Fethullah Gülen] – HDP – PKK Ahitana ny dian-tananareo daholo ny ratsy rehetra. Raha tsy anareo izany, dia ho paradisa i Torkia.
Vantany vao natao ny fisamborana, dia niharan'ny fanafihana daroka baomba izay nahafaty olona 11 sy maratra maherin'ny 100 i Diyarbakir. Nanome tsiny ny PKK ny manampahefam-panjakana sy ny haino aman-jery Tiorka. Namoy ny ainy tamin'ny fanafihana ny lehiben'ny DBP (Antokom-paritra Demokratika), antoko Kiorda mpikambana ao amin'ny HDP, Cungus Recai Altay ao Dyyarbakir.
Rehefa afaka ora vitsivitsy, notondroina fa tompon'andraikitra tamin'ny fipoahana ny Fanjakana Islamika. Voalohany ho an'ny vondrona izany, izay mbola tsy nilaza fa tompon'andraikitra tamina fanafihana tao an-tany Tiorka (anisan'izany ny fanafihana tao Ankara tamin'ny 10 Oktobra 2015, izay nahafaty olona be indrindra teo amin'ny tantaran'i Tiorkia, izay olona 103 no namoy ny ainy).
Tamin'ny 6 Novambra, na izany aza, nilaza fa tompon'andraikitra tamin'ny fanafihana ny vondrona mpisintaka Kiorda TAK (Voromaherin'ny Fanafahana Kurdistan).
Nifidy ny hanesorana ny maha-tsy samborina ireo solombavambahoaka miisa 138 miatrika fanadihadiana heloka bevava, anisan'izany ireo HDP miisa 50, ny firaisamben'ny antokon'ny fitondrana AKP sy ny antoko mpanohitra hafa toy ny CHP sy ny MHP tamin'ny volana Mey. Nankatoavin'ny lalàna ankehitriny momba ny firenena latsaka an-katerena ao Torkia amin'ny ampahany ihany koa ny fisamborana. Nanambara ankivy parlemantera ho fanoherana ny fisamborana kosa ny HDP.
Tsy nitranga manerana an'i Torkia ihany ny fihetsiketsehana fa tao amin'ny tanàna Eoropeana lehibe maro koa. Olona 3000 no tombanana fa nanao fihetsiketsehana tao amin'ny distrikan'i Londra ao Haringey ary niely lavitra tonga hatrany Tokyo ny fihetsiketsehana. Nodarohan'ny polisy mafy ny zanakalahin'ny sombavambahoaka HDP iray nandritra ny fihetsiketsehana ary nampidirina hopitaly tao Istanbul. Ity ambany ity ny lahatsary tamin'ny famoriam-bahoaka manohana ny HDP tao Amude, Syria.
Kiorda ao Amude, Rojava nanao fihetsiketsehana ho fanohanana ny HDP androany
Sakanana ny aterineto ary mihitatra ny fizarazarana ara-politika
Taorian'ny ny fisamborana, angamba nampihatra famerana goavana indrindra mbola tsy napetraka tamin'ny aterineto ny governemanta Tiorka.
Raha mahazatra ny fiadan'ny aterineto sy ny fameperana ny Facebook, Twitter sy ny Youtube taorian'ny fanafihan'ny mpampihorohoro sy ny fanafihana mamely ny mpanohitra, nitatitra ireo mpisera aterineto ao Torkia fa voafetra ihany koa ny Whatsapp sy ny Instagram.
Raha tsy voaràra mazava matetika ny fampiasana ny media sosialy, mampiasa fanampenam-bava hampiadam-pandeha ny fitsidihana media sosialy hatramin'ny aotra, isorohana ny fahafaha-miditra aminy ny manam-pahefana Tiorka.
Mahay mampiasa tsara ny VPN sy ny tolotra proxy misy ankehitriny ireo mpiserasera aterineto Tiorka mba hialàna amin'ny fandraràna. Nanome fidirana VPN maimaim-poana ho an'ireo mpiserasera ao Torkia ny TunnelBear tamin'ny 4 Novambra. Na izany aza, novalian'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny fandraràna ny mpamatsy VPN sy ny severalothers izany. Nitodika tany amin'ny Twitter ny TorProject tamin'izany andro izany mba hialàna amin'ny fandraràna ny Tor ao Torkia.
Nilaza ny praiminisitra Yildirim fa “fepetram-piarovana” ny famerana.
Niampanga ny fisamborana, tahaka ireo mpikambana ao amin'ny CHP ihany koa ny filohan'ny mpanohitra CHP (Antokom-bahoaka Repoblikana) Kemal Kilicdaroglu:
Ny zavatra vita androany hariva dia tsy fanonganam-panjakana ihany fa hetsika hampisaraka ny firenena ihany koa! Voadaroka baomba indray ankehitriny ny TBMM [Antenimieram-pirenena Lehibe ao Torkia]!
Notsikerain'ny filohan'ny MHP (Antokom-bahoaka Nasionalista) Devlet Bahceli ny CHP, nolazainy fa mitovy amin'ny fanohanana fampihorohoroana ny fanohanan'izy ireo an'ireo parlemanteran'ny HDP.
Nitsikera ny fampisehoana firaisankina nataon'ny CHP ihany koa ny hafa:
#AntokoniAtaturkNyCHP Misy olona mino izany ve? Mpisolovavan'ny fikambanana mpampihorohoro ny CHP, nanjary ambadiky ny HDP izy. Raha mbola velona i Atatürk [mpanorina an'i Torkia sy ny CHP], izy no mety ho voalohany hanidy ny CHP.
Voatazona ao amin'ny fonja ambony fiarovana karazany-F tsirairay avy ao Edirne ireo filoha Demirtas sy Yuksekdag. Ny fonja karazany-F dia natao ho an'ireo mpikambana amin'ny fikambanana mitam-piadiana, ireo voaheloka noho ny heloka voaomana sy ireo gadra voasazy ho faty. Notsikerain'ny mpanara maso ny Zon'Olombelona Human Rights Watch tamin'ny fomba hentitra ny foto-drafitrasan'ny fonja.
Nilaza ny mpisolovavan'i Demirtas fa nalaina an-keriny tamin'ny fahatongavan'i Demirtas tao am-ponja ny bokiny sy ny fitafiany ary natokana efitra izy. Nangataka tamin'ny mpisolovava ny mpanao politika mba hitondra baglama, zavamaneno Tiorka ho azy, amin'izay afaka manoratra sy mihira izy any am-ponja.
Ny fanesorana ny haino aman-jery tsy miankina sy ny fanombohan'ny fampielezan-kevim-panjakana nandritra ny roa taona farany na toy izany no fanombohan'ny fiotazam-bokatra ho an'ny mpiara-dia amin'ny fitondrana, mandritra izany fotoana izany. Milaza ny fitsapan-kevitra A&G farany fa raha misy ny fifidianana ankapobeny tontosaina ankehitriny ao Torkia, mety hahazo ny maro an'isa ny AKP ary tsy hahavita hahazo ny 10%n'ny mpifidy ao amin'ny firenena ny HDP.